ဆာကူရာဆေးရုံ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဆာကူရာဆေးရုံကြီးကို 1998 ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ 1 ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် ဆေးရုံကြီး တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လာသည်မှာ 18 နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ၊ အမှတ် (23) ၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ကုတင် 150 ဆန့်ဆေးရုံကြီး ဖြစ်ပါသည်။ အထပ်ပေါင်း 10 ထပ်ရှိပြီး ခေတ်မီဆေးဝါးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စမ်းသပ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုကာ ကုသမှုများပေးနေသည့် အတွက်“ သင့်မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရသည်မှာ ဆာကူရာ” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇောလျက်ရှိပါသည်။ သင့်တင့်မျှတသောစရိတ်နှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်၊ ဆေးကုသသူအားလုံး စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်အတွက် အတွေ့အကြုံရင့်သန်၍ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ဆရာဝန်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများက မေတ္တာရှေ့ထားပြီး အစွမ်းရှိသမျှ ထိရောက်စွာကြိုးစားရန် ၊ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ကိရိယာများနှင့် ၀န်ထမ်းများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မြှင့်တင်၍ ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး ဆေးရုံတစ်ရုံဖြစ်လာရန်စသည့် ကောင်းမွန်သောခံယူချက်တို့ဖြင့် လူနာများကို ပြုစု ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
2. ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
3. သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
4. အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
5. အထွေထွေကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
6. အထွေထွေခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် သားဖွားခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု
7. 24 နာရီ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု
8. 24 နာရီ ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု
9. အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုဌာနနှင့် အတွင်းလူနာဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
10. သွေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
11. 24 နာရီကွန်ပျူတာစနစ်သုံးရောဂါရှာဖွေဓာတ်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
12. ပြင်ပလူနာဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
13. ဆေးဝါး ၀န်ဆောင်မှု
14. ဓာတ်မှန်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ တို့ဖြစ်ပါသည်။
နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ စစ်ဆေး၊ ကုသမှုအမျိုးမျိုးအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံအထိ သွားရောက်ကုသရန် မလိုတော့ဘဲ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ စစ်ဆေး၊ ကုသမှုအမျိုးမျိုးကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် “ဆာကူရာဆေးရုံ” တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
(1) Coronary Angiogram, Angioplasty, Stent (နှလုံးသွေးကြော ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ ချဲ့ခြင်း၊ ဒေါက်ထောက်ပေးခြင်း)
(2) Coronary Athrectomy for Complex Lesions (100% ပိတ်နေသော နှလုံးသွေးကြော အတွင်းရှိ ပိတ်စေသည့်အရာများကို ဖယ်ရှားပြီး ပြန်လည်ဖွင့်ပေးခြင်း)
(3) Peripheral Angiogram, Angioplasty, Athrectomy and Stents for Severe Peripheral Vascular Disease)
(တစ်ကိုယ်လုံးရှိသွေးကြောများ “ဥပမာ - ဦးခေါင်း၊ ခြေ၊ လက်” အစရှိသည့်နေရာများ၌ ဖြစ်တတ်သော ဆိုးရွားစွာသွေး ကြောပိတ်ခြင်းများအား သွေးကြောဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ ချဲ့ခြင်း၊ ပိတ်စေသည့်အရာများအား ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ သွေးကြော ထောက်တိုင်ထည့်ပေးခြင်း)
(4) Carotid Stents for Severe Carotid Stenosis (လည်ပင်းနားရှိ နှလုံးမှ ဦးနှောက်သို့သွားသော ပင်မသွေးကြောပိတ်ခြင်းအတွက် သွေးကြောချဲ့ခြင်းနှင့် သွေးကြောထောက်ခြင်း)
(5) Permanent Pacemaker Implantation (နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးသူများ၊ မမှန်သူများအတွက် နှလုံးခုန်စက် ထည့်ပေးခြင်း)
(6) Echocardiography for the Heart (နှလုံးရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် ECHO ရိုက်ပေးခြင်း)
(7) Treadmill Stress Test (နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် Exercise ECG/Treadmill ပြေးပေးခြင်း)
(8) Treadmill Echocardiography for Cardiac Stress Test (နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် Exercise ECG/Treadmill အပြင် Treadmill နဲ့တွဲ၍ ECHO ရိုက်ပေးခြင်း)
(9) Vascular Ultrasound(သွေးကြောဆိုင်ရာ Ultrasound ရိုက်ပေးခြင်း)
(10) Varicose Veins Radiofrequency Ablation and Sclerotherapy (ခြေထောက်တွင် သွေးကြောထုံးခြင်းများကို အသံလှိုင်းဖြင့်ချေဖျက်ခြင်း၊ ဆေးထိုးကုသခြင်း)
(11) ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
Bi-Ventricular Pacemaker Implantation (ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားအောက်သို့ နှလုံးနှိုးစက်ထည့်ခြင်း)
(12) Rotablator for Complex Calcified Coronary Disease (နှလုံးသွေးကြောအတွင်း ခဲပြီးပိတ်နေသောအရာများကို စက်ဖြင့်ဖယ်ရှားပေးခြင်း)
(13) ASD Closure Device (မွေးရာပါနှလုံးနံရံအပေါက်ပါသူများအား ခွဲစိတ်ရန်မလိုဘဲ ပိတ်ပေးခြင်း)
အထက်ပါဝန်ဆောင်မှုများအပြင် ဆေးရုံတက်၍ ကုသမှုခံရန် လိုအပ်သောလူနာများ အတွက် နှလုံးအထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်(Coronary Care Unit) ကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
♦ ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
ဆာကူရာဆေးရုံမှ ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များအတွက် ခေတ်မီကျောက်ကပ်အထူးပြု ခွဲစိတ်ကုသမှု အမျိုးမျိုးကို အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများက နောက်ဆုံးပေါ်ရောဂါရှာဖွေရေး စက်ပစ္စည်းများဖြင့် 24 နာရီ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
(1) အသံလှိုင်းသုံးဆီကျောက်ခြေစက်(ESWL – Extracorporeal Shock wave Lithotripsy)
- ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အတွင်းရှိ 2cm အရွယ်အစားအောက်ငယ်သော ကျောက်အမျိုးအစားများ။
- မေ့ဆေးပေးခွဲစိတ်ရန်မလို၊ မနာ မကျင်၊ အသံလှိုင်းအသုံးပြုခြင်း။
- ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပသို့ ခြေဖျက်ပြီးသော ကျောက်မှုန်များသည် ပုံမှန်ဆီးသွားခြင်းဖြင့် စွန့်ထုတ်နိုင်။
- အချိန်အားဖြင့် နာရီပိုင်းမျှသာကြာမြင့်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ရန် မလိုအပ်ပါ။
(2) ၀မ်းဗိုက်တွင် အပေါက်ငယ်ဖောက်၍ မှန်ပြောင်းဖြင့် ဆီးကျောက်ခြေကုသခြင်း
(PCNL-Percutaneous Nephrolithotripsy with Rigid Nephroscope)
- ၀မ်းဗိုက်တွင် အပေါက်ငယ်ဖောက်၍ ကျောက်ကပ်ကြည့်မှန်ပြောင်းအသုံးပြုခြင်း။
- အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်အတွင်းရှိ ကျောက်များနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း၏ အမြင့်ဆုံးနေရာတွင် ရှိသော ကျောက်များအတွက် ကုသနိုင်သည်။
- အရွယ်အစား 2cm ထက်ကြီးသောကျောက်များ။
- ဤသို့ကျောက်ခြေကုသခြင်းသည် အကြီးစားခွဲစိတ်မှုမဟုတ်သောကြောင့် လူနာအနေဖြင့် မိမိ၏ နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အချိန်ကုန်သက်သာစွာ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
(3) လေဆာစက်ဖြင့် ဆီးကျောက်ခြေခြင်း (Laser Lithotripsy)
- ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်အတွင်းရှိ ကျောက်များကို လေဆာ 30 W ကို အသုံးပြု၍ ခြေခြင်း။
- ၀ပ်စွမ်းအားမြင့်စက်ဖြစ်သဖြင့် ပုံမှန်ထက်မာကျောသောကျောက်များအားခြေနိုင်ခြင်း။
- လိုအပ်သလို ကွေးဆန့်နိုင်သော ဆီးလမ်းကြောင်းကြည့်မှန်ပြောင်း (Flexibler Ureteroscope, Cystoscope) များဖြင့် ဆီးကျောက်ရှိရာသို့ရောက်ရှိပြီးလျှင် ထိုမှန်ပြောင်းမှတစ်ဆင့် လေဆာဖြင့် ဆီးကျောက်ခြေခြင်း။
(4) ဆီးလမ်းကြောင်းကြည့် အထူးမှန်ပြောင်းများ (Flexible Ureteroscope, Flexible Cystoscope, Nephroscope)
- လိုအပ်သလိုကွေးဆန့်နိုင်သော ဆီးလမ်းကြောင်းကြည့်မှန်ပြောင်းသည် (တယ်လီဗေးရှင်းနှင့်) ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ပုံရိပ်များကို ပိုမိုကြည်လင်စွာဖြင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု၍ ဆီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ရောဂါရှာဖွေနိုင်ပြီး အရွယ်အစား သေးငယ်သော ဆီးကျောက်များကို ဖယ်ရှားကုသနိုင်ခြင်း။
- ထိုမျှမက ဆီးကျိတ်ကြီးရောဂါကိုပါ ခွဲစိတ်မှုမလိုဘဲ မှန်ပြောင်းမှတဆင့် ဆီးကျိတ်ခြစ်နိုင်ခြင်း။
(5) ကျောက်ကပ်တုသွေးသန့်စင်စက် (Haemodialysis Machine)
ကျောက်ကပ်တုသွေးသန့်စင်ခြင်း (Haemodialysis) သည် အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့် ရပ်တန့်/ရပ်ဆိုင်း၊ လျှော့နည်းနေ သော ကျောက်ကပ်၏တာဝန်များကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးသော ကုသမှုဖြစ်သည်။
- ချို့ယွင်းနေသောကျောက်ကပ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အဆိပ်အတောက်များ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ပိုလျှံနေသောရေဓာတ်များ စွန့်ပစ်ခြင်းတာဝန်တို့ကို ကျောက်ကပ်တုသွေးသန့်စင်စက်မှ တဆင့်စွန့်ပစ်နိုင်သည်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းကြောင့် ယာယီ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုးစသည့်ရောဂါများကြောင့် နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်အစားထိုး ကုသရန်စောင့်ဆိုင်းနေသော လူနာများတွင် အသက်ကယ်ကုသနိုင်သည်။
- တစ်ပတ်လျှင် (3)ကြိမ် ကျောက်ကပ်ဆေးလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
- ကျောက်ကပ်တစ်ကြိမ်ဆေးလျှင် ပုံမှန်အားဖြင့် (3)နာရီမှ (5) နာရီမျှ ကြာမြင့်သည်။
♦ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု
သွား၊ ခံတွင်းနှင့် မေးရိုးဆိုင်ရာ ဓာတ်မှန် (Dental X-ray) ၀န်ဆောင်မှုနှင့်တကွ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူနာပြုများက ခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို အထိရောက်ဆုံးကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
♦ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများအတွက် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်း ကြောင်းကြည့်မှန်ပြောင်း (Endoscope) ဖြင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ရောဂါအလိုက် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
♦ အထွေထွေကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံမှသာ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ၍ လိုအင်ဆန္ဒများ ပြီးမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံမှန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများ မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာများကို မခံစားရဘဲ ဖြစ်နေတတ်သော ရောဂါများကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ထိရောက်သောကုသမှုများပေးခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
CP (Auto), ESR
(အသည်းရောင် အသားဝါ B ပိုးစစ်ဆေးမှု)
(အသည်းရောင် အသားဝါ C ပိုးစစ်ဆေးမှု)
Digital Chest (X-ray)
စစ်ဆေးမှု) Fasting Lipid
(သွေးစစ်ဆေးခြင်း) CP (Auto), ESR
♦ အထွေထွေခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် သားဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
ခွဲစိတ်ဆောင်တွင် အထူးကြပ်မတ်ပိုးသတ်ထားသော အခန်းကျယ်7ခန်းရှိပြီး အထွေထွေခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုများ၊ ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုများကို 24 နာရီ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် သဘာဝနည်းအတိုင်း မွေးဖွားလိုသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက်လည်း သားဖွားမီးယပ်ပါရဂူများနှင့် ကျွမ်းကျင်သူနာပြုများက အချိန်မရွေးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
♦ 24 နာရီ လူနာတင်ယာဉ် ၀န်ဆောင်မှု
ဆာကူရာဆေးရုံမှ အသက်ကယ်စက်ကိရိယာမျိုးစုံ တပ်ဆင်ထားသော လူနာတင်ယာဉ်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အထောက်အပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။
♦ 24 နာရီ ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် အရေးပေါ် ၀န်ဆောင်မှု
ဆာကူရာဆေးရုံ၏ အရေးပေါ်ဌာနတွင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများစွာရှိသည့်အပြင် အသက်ကို အချိန်မီကယ်ဆယ်ပေး နိုင်သည့် အသက်ကယ်ပစ္စည်းကိရိယာများစုံလင်စွာရှိသည့်အတွက် အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုများကို ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ မြန်ဆန် ထိရောက်မှုရှိစွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
♦ အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုဌာနနှင့် အတွင်းလူနာဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
ဆာကူရာဆေးရုံ၏ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် မျက်ခြည်မပြတ်ဂရုစိုက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သည့် လူနာများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို အနည်းငယ်မျှလစ်ဟာသွားမှု မရှိရလေအောင် အထူးဂရုပြုစောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရခြေမရှိတော့သည့် လူနာများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များနှင့် ဆက်လက်ကုသမှုခံယူရန် အတွင်းလူနာဌာနကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီး လိုအပ်သည်များကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်ရမည့်သူများအတွက် အခန်းအမျိုးအစားများမှာ -
- Single Hall
- Isolated Single Room
- Special Room (A,B)
- VIP Room တို့ဖြစ်ပါသည်။
♦ သွေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
အတွေ့အကြုံရင့် ရောဂါဗေဒဆရာဝန်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုယ်တိုင် သွေးများကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီး သွေးသန့်များကို စုဆောင်းထားကာ လိုအပ်ပါက သွေးသွင်းကုသမှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် သွေးစုဆောင်းဌာန (Blood Bank) ကို ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
♦ 24 နာရီ ကွန်ပျူတာစနစ်သုံး ရောဂါရှာဖွေဓာတ်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
ဆာကူရာဆေးရုံရှိ ကွန်ပျူတာစနစ်သုံးရောဂါရှာဖွေရေး ဓာတ်ခွဲခန်းသည် ရောဂါဆိုင်ရာ ပါရဂူဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ကျွမ်းကျင်သော ဓာတ်ခွဲပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် အဖြေများကိုမှန်ကန်တိကျမှုရှိစွာ ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
♦ ပြင်ပလူနာဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု
ပြင်ပလူနာဌာနတွင်ပြသမည့်သူများအနေဖြင့် မိမိကုသလိုသော အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် မည်သည့်နေ့ရက် မည်သည့်အချိန်တွင်လာရောက်ကုသခွင့်ရနိုင်မည်ကို ဖုန်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း လာရောက် ၍ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ယူနိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီးနေရာကျယ်ဝန်းသောကြောင့် လူနာနှင့်လူနာစောင့်များအနေဖြင့် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ သက်တောင့်သက်သာနားနားနေနေ စောင့်ဆိုင်းနိုင်အောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးထားပါသည်။
ပြင်ပလူနာဌာနတွင် လာရောက်ပြသနိုင်သောဆရာဝန်ကြီးများ -
- ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောအထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- အရိုး၊အကြော အဆစ်နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ
- ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- သားဖွားနှင့်မီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- အသည်း၊အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သမားတော်ကြီးများ
- အရေပြား အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- ကလေးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး
- ရင်ခေါင်းနှင့် အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်ကြီးများ
- ရင်ခေါင်းနှင့်အထွေထွေ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး
- စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- မျက်နှာမေးရိုး၊ခံတွင်းနှင့် ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ
- အကြောအဆစ် ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးရောဂါကို ဆရာဝန်များ
နိုင်ငံတကာမှ စစ်မှန်သော ဆေးဝါးများရောင်းချခြင်းကို 24 နာရီအပြည့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဆေးဝါးများနှင့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို သင့်တင့်မျှတသောဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။
♦ ဓာတ်မှန်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ
- Digital X-ray (ဒီဂျစ်တယ် ဓာတ်မှန်)
- CT scan (ကွန်ပျူတာ ဓာတ်မှန်)
- Digital Mammography (ရင်သား ဓာတ်မှန်)
- C-arm (ခွဲစိတ်ခန်းသုံး အထူးဓာတ်မှန်)
- Dental X-ray (သွား ခံတွင်းနှင့် မေးရိုး ဆိုင်ရာဓာတ်မှန်)
- Ultrasound (အသံလှိုင်းသုံး တီဗွီဓာတ်မှန်)
- 3D ultrasound (သုံးဖက်မြင် ပုံရိပ်ဖော် တီဗွီဓာတ်မှန်)
- Echocardiogram (နှလုံးအထူး တယ်လီဗေးရှင်းဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း)
- Biplane Angiography
- Dexa Scan (အရိုးသိပ်သည်းမှုတိုင်းတာခြင်း)
- Hystero-salpingography (သားဥပြွန်လမ်းကြောင်းဓာတ်မှန်) စသည့် ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုသောကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ရောဂါများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ အထိရောက်ဆုံး ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။